रमेश प्रसाईले नन्दालाई “मेरो ओठभरी हाँसो छरिदेउ” भन्दा नन्दा मुस्कुराईरहिन्, हेर्नुहोस् रमाइलो (भिडियो सहित) – Ap Nepal
रमेश प्रसाईले नन्दालाई “मेरो ओठभरी हाँसो छरिदेउ” भन्दा नन्दा मुस्कुराईरहिन्, हेर्नुहोस् रमाइलो (भिडियो सहित)
रमेश प्रसाई ताप्लेजुंगमा २०५० साल’मा भएको हो । उनका बुवा आमा शिक्ष’ण पेशामा संलग्न छन् । त्यसैले उनी साथैदेखि चेतन’शिल थिए । दुवै आँखा नभए’का उनी जन्म’जात नै यस्तै हुन् । उनी सामाजिक विषयमा बोल्छन्, सामा’जिक सञ्जा’लमा पनि निकै सकृय छन् ।
झापाको गह्रामुनी’मा उनी ५ कक्षा सम्म पढेका हुन् । त्यस’पछि उनी पुर्वाञ्चल ज्ञान चक्षु वि’द्यालयमा पढ्न थाले । त्यो विद्यालयमा दृष्टि’विहिन विद्यार्थीहरु अध्य’यन गर्ने गर्थे । दृष्टि’विहिन मात्र अध्ययन गर्ने विद्यालय भएकाले उन’लाई त्यहाँ पढ्न पनि सजि’लो भयो । उनी सानै देखि नै गीत संगीत’मा रुची राख्थे ।
दृष्टि’विहिनहरुका लागि उप’युक्त हुने विभिन्न कृया’कलाप गराउने भएकाले अन्य कृयाक’लापमा पनि उनी सकृय थिए । उनले २०६९ सालमा एस’एलसी दिएर पहिलो श्रेणि’मा पास गरे ।
पहिलो पटक भारतीय प्रधान’मन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा उनले पहिलो पटक सा’माजिक सञ्जाल फेसवु’कमा ला:इभमा आएर दिएको अभिब्य’क्ति पछि चर्चित भएका थिए ।
२०७५ साल बैशा’खमा नरेन्द्र मोदी नेपा’ल आउँदा उनले त्यसवारे बोलेका थिए । सामाजिक सञ्जा’लमा उनले निकै खरो भनाई सार्वज:निक गरेका थिए । त्यो भनाई निकै चर्चि”त भयो ।
अहिले उनी पब्लिक स्पी’करका रुपमा परि’चित छन् । रमेश निकै चलाख बच्चा भए:को उनको आमा सविता प्रसाईले बताउँछिन् । जन्मदै दुवै आँखा टालि’एको उनी रुँ दा पनि ना’कवाट आँ शु आउने गरेको पनि उनले बताउँछिन् ।
यस्तो अवस्था’मा जन्मिएका रमेश लाई ठूलो भएर जिवनमा केही गर्न सक्दैन वि’ष खुवाएर मा’रिदिनु भनेर छिमेकीले भनेको उनकी आमाले सम्झ’न्छिन् । न्वारनमा आ’एका पण्डि’तले समेत कसरी दुध खुवाउँ’छौ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
रमेशलाई हिन्दी’ फिल्म निकै मन पर्छ । सुरुमा त रमेशले पढ्न सक्दैन भनेर विद्यालय पनि पठा’एका थिएनन् । तर पछि रमेशले आफुलाई नदेख्ने भएर हे’पेको भनेर कर गरेपछि मात्र उनलाई विद्यालय भर्ना गरिदि’एका थिए । उनी विद्या’लयमा भर्ना भएपछि उनले वि’लक्षण प्रतिभा देखाएका थिए ।
पछिल्लो समय रमेश प्रसाई पत्नी नन्दा सँग रमाउन थालेका छन् । भर्खरै विवाहित यी जोडी को हरेक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । उनीहरूको भिडियो लाखौंले हेरेका छन् भने हजारौं लाइक कमेन्ट र शेयर पाएका छन् ।
उक्त जोडी सार्वजनिक कार्यक्रम मा समेत देखिन थालेको छ । केही दिन अघि विराटनगर मा आयोजना भएको सार्वजनिक कार्यक्रम मा यी दम्पती नै सहभागि बनेका थिए ।
हेरौं टिक टक मा रमाइलो भिडियो…
Prevसंसार भर बहादुरी नेपाली सेनाको कठोर संघर्ष (तालिम)को भिडियो भाईरल (भिडियो हेर्नुस)
Nextभगवानसँग तपस्या गरेर मागेकी बुहारी यति मजाकी , आमाले गरिन बुहारीको यति धेरै तारीफ (भिडियो सहित)
रचना रिमालको जीवन भो;गाइ…अब दिदीलाई पनि गायिका बनाउदै- हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित)
पेट्रोलबिनै चल्ने ‘मोटर बाइक’कक्षा ९ मा पढ्ने वि’द्यार्थीले बनाए ! हेर्नुहोस्
पछिल्लो समय भाइरल संगीता राना मगरको रेकर्ड भयो पहिलो गीत, पहिलोपटक यति धेरै खुसी (भिडियो सहित)
टिका सानु र कृष्ण कंडेल वि’वाद बारे बोले चर्चित गायक राजु परियार (भि,डियो सहित)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (119313)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (72526)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (46352)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (41230)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (38506)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (37187)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (36870)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (36593)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (34904)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (33067)
काठमाडौं महानगरपालिकाका नयाँ मेयर बने बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल
धरानका मेयरले यसरी झाडु बोकेर भानु चौकमा उत्रिए , यो देखेर सबैले गरे तारिफ (भिडियो सहित)
भारतीय खेलमैदानबाटै बालेनलाई दिए बधाई को हुन त उनीहरू ?
निर्वाचनमा पार्टी हार्नुको कारणबारे बोले ओली गरे यस्तो खुलासा…
भारी मतकासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवीकी मितिनी मञ्जुदेवी उपमेयरमा विजयी